एयरपोर्टमा आक्रोशित हुँदै देउवाले भने म पनि भित्रैदेखि देखाइदिन्छु – YesKathmandu.com
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतमा दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई नभेटेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्केका देउवाले त्रिभुवन विमास्थलमा पत्रकारसँग भने ‘दलाई लामाका कुनै पनि प्रतिनिधिसँग भेट गरेको छैन । हुँदै नभएको कुरामा मैले के जवाफ दिने?’
दलाई लामाका प्रतिनिधि भेट्नुभएको हो?’ पत्रकारले प्रश्न गरेपछि देउवा उत्तेजित हुँदै जवाफ दिएका थिए ।
‘गोवामा भएको कार्यक्रममा म मञ्चमा गएँ । फर्केर आएँ । कोहीसँग भेटघाट र गफगाफ भएन’, देउवाले भने, ‘मैले कोसँग कुरा गरेँ?’ नेपालका मिडियाले हुँदै नभएको कुरा लेखेको भन्दै देउवाले आक्रोश व्यक्त गरे। ‘हलभित्र कोको बसेका छन, मैले सोध्ने कुरा भएन। को को छन् मलाई के थाहा?’, देउवाले प्रश्न गरे, ‘मैले परिचय सोध्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन। नेपालका मिडियाले हुँदै नभएको कुरा लेख्ने?’
भित्रैदेखि लखेट्ने हो भने म पनि देखाइदिन्छु’ भन्दै देउवा पत्रकारसामु आक्रोशित भए। नेपाल एक चीन नीतिबाट विचलित नहुने भन्दै देउवाले आफ्नो नीति नेपालले अक्षरशः पालना गरेको बताए ।
‘एक चीन नीतिविरुद्ध को जान सक्छ ? हामी हाम्रो नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ’, देउवाले भने, ’मित्रराष्ट्रप्रतिको नीति हामी हुबहु अक्षरशः पालना गरेको छ ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा मोदीले सबैले समेटेर लैजान सुझाव दिएको देउवाले बताए । सभापति देउवालाई स्वागत गर्न रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री मन्त्री शंकर भण्डारी विमानस्थल पुगेका थिए ।
सभापती देऊवाजी – हजुर यतिको झूट हुनुहुदो रहेछ ! तपाईका कुरा कस्ले पत्याऊने ? दलाई लामाको मुख पत्रले नेपालका पूर्व प्र मं शेर वहादुर देऊवा , वक्ता , अमित शाह , निर्वासित तिब्बतका प्र मं ::: सांगे लगायत रहेको पुष्टी गरेकोछ । तपाई दिऊसै टस लाईट वाल्न थाल्नुभयो ?
किर्तीपुर एकता समाज(किर्तीपुर-१)काठमाण्डौ says:
झुटोमात्रै बोल्ने भएकोले जिब्रो पनि छोटो छ नि !कंगाल सैतान छुद्र र झुट मानसिकता जन्मजात गुण भएको देउवाको चरित्र सबैले जानेका छन्।यो राष्ट्रघातीको के कुरा गर्ने?
हुनत म देउबाको समर्थक होइन , तर जुन आरोप तपाईँले यहाँ लगाउनु भयो , त्यो गल्ती हो। यसमा तपाईँ यति छुद्र बोल्ने व्यक्तीले देउबाको खानदान र जिब्रोको जुन कुरा गर्नुभयो , त्यो एकपल्ट राम्ररी अध्यन गर्नु Please.
दलित तथा एकल महिलालाई जस्तापाता
जलवायु नाप्ने यन्त्र बिग्रँदा मौसम परिवर्तनबारे जानकारी नै हुँदैन
विप्लव माओवादीको तिब्बतसँग साँठगाँठ